Dawo Bukuutay Maxaa Lagu Daweeyaa. Axmed Yuusuf Cali Yuusuf (Idaajaa) 02/06/2012 Gef igu ma ah in aan xillingan qalinka u qaato maqaalkan isla markaana ila ma ahan inuu gocasho keeni doono haddii dhanka wanaagsan la eego . aniggna ila ma gudboona in aan la ilaalin anshaxa saxaafada iyo afmaalka balse waxaa hubaal ah haddii la doonayo in bukaan daawo loo helo waxaan aan laga fursaneyn in arrinka dabo iyo dacalba loo feydo, sidaasi darted waxaan ka cudur daaranayaa hadii aan qalinka ku talaxtago taana ay tahay mid ila gashay raadinta xalka balse ulajeed kale aan raad ku laheyn ama cid gaar loogu dan laheyn. Marxalada dalka & dadka marayo waa mid u baahan in hal meel looga soo wada jeesto oo aan loo kale harin si loogu gudbo wax na horyaalay ee ka hoos kacay Soomaalida dhexdeeda muddo ka badan rubac qarni loo na helo xal waara oo ay ku diirsadaan jiilalka soo socda iyo kuwa hadda jooga.
Soo af jarida Colaadaha soo noqnoqday ,ka bixida gaajada nagu habsatay ,ka gudbida horumaar la’aanta,dabar goynta faqriga iyo dib-u-dhaca sababay in aan kheyrkeena ka harno runtii cidna la ma ahan in hal maqaal iyo wax la mid ah lagu soo koobi karo balse aniga shaqsi ahaan ka ma fogi mowqifkaasi laakin waxbaa ii dheer, marka kowaad haddii qof waliba meel kaga aado xal u helida arrimahan waxaan qabaa in la guuleysan doono, marka labaad waxa I riixayo waa kaalinteyda qofnimo,suxufnimo iyo somalinimo.
Soomaliya waxey u baahan tahay hogaan siyasadeed oo heer waliba leh oo ka yimid shacabka ayna soo doorteeen aygoo xor ah oo og cida ay masuuliyada dalkood ku aaminayaan.
Sido kale Soomalida waxey u baahan tahay hogaan siyaasadeed oo u xaq soori kara kana saari karaa shakiga iyo walwalka ay ka qabaan amniga iyo xuquuqdooda dadnimo,deegaan iyo dalba inay waayaan isla markaana si cadaalad ah ugu garsoori kara awooda masuuliyada,kheyraadka dalka iyo xuquuqaha aasaasiga ee nolosha sida waxbarashada,caafimaadka iyo helitaan fursadaha shaqo.
Tan kale somalida waxey u bahan tahay hogaan siyaasadeed oo ku shaqeeya rabitanka shacabka u ogalna u madaxbanaanida ka tashiga aayahooda heer waliba isla markaana ku dhaqa wax ay shacabka inta ugu yar iyo inta ugu badan raali ka yihiin .
Si loo gaaro himiladaasi waxaa muhim ah in siyaasiyiinta ka shaqeeyaan wadada lagu gaari lahaa kana quustaan xilka lagu raadinayo awood lacageed,xoog ,dad iyo degaan ka been sheegid, keli-is-caleema saar iyo mu’aamaro.waana wax aan u soo joognay ciribta danbe ay leedahay masuuliyada noocaasi ku timid.
Waa in laga quustaa rajada noocaas ah maxaa yeelay wax socon kara ma ahan oo dal ,degaan iyo dadba lagu matali karo,haddii aan laga tanaasulin waxaa hubaal ah in bilaash loo daalayo balse waxaana shaki iiga jirin in goortii ay noqotoba shacabka gaari doono xili ay codkooda ugu talin doono aayahooda ayna muujin doonaan in awooda codka ay ka xoog badan tahay xabbada,lacagta,is-magacaabida,dhaqan iyo darjo been abuur ah .
Awooda shacabka ma ahan mid gacamaha lagu dabooli karo mar hadii ay soo muuqato waxaana marag u ah taxanaha taariikhda dadyowga dunida soo maray.
Haddaba maxaa siyaasiyiinta kelefay ayagoo ogsoon waaqicigan jira inay siyaabo kale ay xil ku doonaan ? waxaa run ah maahmaahda dhaheysa “aan is jiid jiidno waa gacmo daalis” haddii dalkan iyo dadkan sidaasi lagu xukumi karo rag badan ayaa iskudayay kadib burburkii dowladii dhexe halkee ku danbeeyeen ?ma isweydiinay? dalka iyo dadkaba ma u taliyeen? Waa cashar inagu filin oo aan u baahneen in la sii gorfeeyo balse oo keliya micno ku leh in la isxusuusiyo maadaama aan goob jog ka aheyn.
Haddii aan laga gudbin fakarkan iyo qaab darada talada iyo xukunka lagu raadinayo waxaa xaqiiqa ah in arrinka yahay jug jug meeshaada jog.
Dawada dhibaatada somaalidana qaabka hadda loo raadinayo laguma helo sida darted waxaa talo iga ah in shacabka fursad la siiyo oo faragelinta gudaha iyo dibada laga daayo iyo in loo daayo inay aayahooda ka tashadaan isla markaana lagu qasbin wax aysan u dhameyn oo ay raali ka aheyn, maxaa yeelay awooda shacabka ayaa leh ,dowladna waa tan shacabka ka timaada, nabadna waa tan shacabka dhaliya ee qaran ma ahan wax xoog , khiyaano,mu’aamaro ,been abuur, dad iskariixid sad bursi iyo ku tacdin sharfka ,karamada iyo xaquuqda shacabka lagu gaari karo.
Haddii shacabka baariga ah ka aamusay oo uu aysan kadaba qaylin kuwa ku been abuurtay magacooda xilna ku doonay uu shacabkana u arkeeen inay dawo u heli doonaan dhibaatada ay ku jiraan welina aan dhibkii laga gudbin waxaa shacabka u cadaaday in ay dawada (siyaasiyiinta) bukootay. su’aasha waxey tahay haddii dawo bukooto maxaa lagu daweeyaa?
Cidii ay ka dhab tahay inay xilligan adag shacabka ka gudbiso xilna u qabto ha ka shaqeyso soo celinta jawi nabadeed oo fursad siin kara shacabka inay codkooda ku ciil baxaa.
Dowlad la jacburiyay oo aan shacbka beec la gelin waxaa ka kheyr roon intey doonto hanagu qaadatee inaan kawada shaqeyno sidii dalka jawi nabadeed loogu soo dabaali lahaa oo surageliya doorasho xor ah.
W/Q: Axmed Yuusuf Cali Yuusuf (Idaajaa)
axmedafgoi@hotmail.com www.afgoi.net Facebook WAR IYO SAWIRO